नेपालमा ठूलो आर्थिक संकटको खतरा : खनाल — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > नेपालमा ठूलो आर्थिक संकटको खतरा : खनाल
नेपालमा ठूलो आर्थिक संकटको खतरा : खनाल
दशैंमा बाजासहित सरायें नाचिन्थ्यो, खुब रमाईलो गरिन्थ्यो
म सानो छँदा दशैं अर्घाखाँचीमा मनाइन्थ्यो । परम्परागत रुपमै मनाईन्थ्यो । त्यहाँ कोट भन्ने हुन्छ, कोटमा ९÷१० दिनसम्म पुजारी बस्ने गर्दथे । प्रत्येक दिन पूजा गर्ने, दशैंमा बाजासहित सरायें नाच्ने, पुरानो संस्कृतिसँग रमाउने, ठूला मान्यजनबाट टिका लगाउने, आशिर्वाद लिने सामान्य नेपाली संस्कृति अनुसार नै दशैं मानिन्थ्यो । म आईए पढ्दा देखि नै काठमाडौ आएँ । सुरुमा त भारततिर भएर गाउँ जानुपर्दथ्यो, विरगंजको रेल नौतुना हुँदै सुनौली गईन्थ्यो । कतिपय बेला बुटवलबाट हिंडेरै गएको छु । पाल्पा लगायत, गोरुसिंगे हुँदै पनि घर गईन्थ्यो । दशैंका बेला सम्पन्न धनीले सिंगै खसि काट्ने, गरिबहरुले भने खसी काटेर भाग लगाएर खाने चलन थियो । त्यस्तै हाम्रो तिर विवाह, छोराछोरी जन्मेको वा कोहि बिरामी परेर निको होस् भन्ने भाकल गरेको छ कि भनेर कोट अर्थात् मन्दिरमा चढाउने चलन छ ।
फर्केर हेर्दा बाल्यकालको दशैं स्मरणीय
गाउँमा अधिकाँसले अधिकाँस समय ढिंडो, आँटो खाने नै हो । पर्वमा भात खाने, मिठो मसिनो खाने, मासु, रोटी, फलफुल खाने गरिन्थ्यो । ती सबै मिठा चोखा खानेकुरा फलफुल सबैलाई बाँडेर सौहार्दपूर्ण ढंगले, सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्ध साह्रै स्मरणीय थियो । फर्केर हेर्दा त्यो दिन साह्रै स्मरणीय लाग्छ ।
पहिले गाउँमा गईन्थ्यो । अहिले दाजु बुटवलमा हुनुहुन्छ । मेरो दशैं कहिले बुटवल, कहिले बिदेश त अधिकाँस समय काठमाडौमा बित्छ । तर पहिले जस्तो अहिलेको दशैं हुँदैन । एक त स्वास्थ्यका कारण पहिलेजस्तो खाना, मासु खान मिल्दैन । बच्चा केटाकेटीहरुको खानपान पनि परिवर्तन छ । उनीहरु खसीमा भन्दा कुखुरामा बढि चाह गर्छन् ।
पर्वहरु परिवारवादी, व्यक्तिवादी बन्दै जाँदा दुःख लाग्छ
पहिले–पहिले ठूलो उत्सव र पर्वका रुपमा पारिवारिक जमघट, दाजुभाई, टोल, छिमेक, गाउँले नै झुमेर सामुहिकरुपमा नाचगान रमाईलो गर्दै आत्मीयता साट्दै मनाईने चलन थियो । अहिले भने पर्वहरु परिवारवादी, व्यक्तिवादी बन्दै गएको छ । त्यतिबेलाको रमाईलो र आजको रमाईलोमा आकास–जमिनको फरक छ । त्यसकारण अलि दुःख लाग्छ ।
मानिसहरुमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ
अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा समष्टिमा केहि–केहि सूचक राम्रो छ । जस्तो राजश्व बढेको छ । आर्थिक गतिबिधिहरु बढेका छन् । कर तिर्नेहरु बढेका छन् । अहिले सामान्यरुपमा हेर्ने हो भने कालीमाटीमा तरकारीको काराबार गर्ने सबैले कर तिर्छन् । पहिले तिर्दैनथे । मानिसहरुमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार देखिंदैन
आधारभूततहमा जुन अर्थतन्त्रका समस्या, नीतिगत अन्तरबिरोध कायमै छ । जुन सुधार र विकासमा नयाँ कुरा ल्याईयो त्यो सम्बन्धीत ठाउँमा नपुग्ने संरचनागत र संस्थागत परिपाटी छ । स्रोत, सम्पन्नका लागि व्यापार वा वित्तिय कारोबार र फाईदा बढेको छ । बजेटले समृद्धिका महत्वकाँक्षी कुरा गरिएकोमा आधारभूतरुपमा सुधार गर्दै हाम्रो स्रोत साधनको ठिक ढंगले परिचालन गर्ने, मानिसहरुले रोजगारी पाउने लगायत प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यो अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार देखिंदैन ।
सामान खरिद गरौं भन्यो कल्पनै गर्न नसकिने महंगी
दशैंका समयको कुरा गर्यो भने महंगी यति धेरै बढेको छ कि म आफैं तरकारी बजारमा वा केहि सामानहरु लिन जाँदा खरिद गरौं भन्दा कल्पनै गर्न सकिँदैन । महंगी त्यति धेरै बढेको छ ।
ओहो ! यस्तो महंगीमा मानिसहरु कसरी बाँचिरहेका छन् ?
महंगीका कारण मानिसहरु कसरी सामान किनिरहेका छन् भन्ने लाग्न थालेको छ । ओहो ! कसरी खरिद गरेर बाँचिरहेका छन् भनेर आफैंलाई आश्चर्य र अचम्म लागिरहेको छ ।
नेपालमा ठूलो आर्थिक संकटको खतरा !
महँगी बढ्ने, रोजगारी र उत्पादन नबढ्ने, रेमिट्यान्स त घट्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । साउदी अरेबीयामा त आर्थिक समस्या नै आईसक्यो । त्यस्तै अरु खाडी मुलुकमा पनि त्यो समस्या आउने देखिएको छ । बिदेशमा जाने नेपालीको दर एक्कैचोटी कम हुने स्थिति छ । खाडी लगायत देशमा भएकाहरु पनि एकैचोटी फर्कने अवस्था देखिएकाले नेपालमा ठूलो आर्थिक संकट ल्याउँछ कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।
स्रोत र साधन, आम्दानी नहुनेका लागि पर्व ज्यादै पिडादायी र कष्टपुरक
सामरिक, सूक्ष्म र जनताको तहमा पर्वलाई जोडेर हेर्ने हो भने सामान्य गरिब, आय नहुने, बिदेशमा गएर छोराछोरीले पैसा नपठाउने अवस्थामा कसरी बाँच्ने, पर्व कसरी मनाउने भन्ने भएको छ । गाउँघरमा एक छिमेकमा मासु पाकिरहेको छ । तर अर्काे परिवारमा एक छाक खान नपाउने अवस्था छ । कारण खान नपाउने परिवार, उनीहरुको बालबच्चाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । आमरुपमा गरिबका लागि स्रोत र साधन नहुने र अरु कतैबाट आम्दानी नहुनेका लागि यो पर्व ज्यादै पिडादायी र कष्टपुरक छ । मूल्यवृद्धिले झन् प्रताडित बनाएको छ ।
दशैं मौका हो, ऋण गरेरै पनि खरिद गर्छन्, यहिबेला लुट्नुपर्छ …
बजारमा निस्कँदा केहि खाने कि नखाने भनेर झस्किन पर्ने अवस्था छ । महंगी सँगै एउटा पसलमा एक किसिमको मूल्य छ भने अर्काेमा अर्काे मूल्य छ । बजारमा अराजकता छ । नियमअनुसार बजार चलेको छैन । खुल्लाबजार अर्थनीति अनुसार बजार प्रतिष्पर्धि छैन । दशैं मौका हो यहि बेलामा मानिसले जसरी पनि खरिद गर्छन् । ऋण गरेर पनि खर्च गर्छन् । त्यसो भएर यहि बेला लुट्नुपर्छ भन्ने र बजारमा त्यो प्रवृति हाबी देखिन्छ ।
२४ असोज २०७३
२०७३ असोज २४ गते १८:२५ मा प्रकाशित
विदामा घुमफिर : पहिले देश बुझौँ अनि विदेश !
जुलुसै गएसरि विपीको घरमा टिका लगाईन्थ्यो
हेर्दा हेर्दै भोजपुर सदरमुकाम आगोले सखाप ! आगो नियन्त्रणमा(फोटोकथा)
स्वावलम्वन लघुवित्तको संस्थापक शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
एनआरएनए अध्यक्षका उम्मेदवार पन्तका यस्ता छन प्रतिवद्धता र विशेष कार्यसूचि